Tartan aqooneedkii kediska xaafadaha Puntland oo lasoo gabagabeeyay | Golis Telecom Somalia
Tartan aqooneedkii kediska xaafadaha Puntland oo lasoo gabagabeeyay
Barnaamijkan oo ay maalgalisay Shirkadda Golis ayaa si xiriir ah uga socday warbaahinta SBC bishii barakaysnayd ee Ramadaan, ayaa waxaa cilmiga qaybihiiisa kala duwan ku tartamayay xaafadaha kuyaala dagmooyinka Puntland.
Xafladii Gunaanadka ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland waxana wareeggii kama dambaysta isugu soo haray xaafadaha 1da Augost Garowe , iyo Hodan Garoowe waxana koobkii ku guulaystay xaafadda 1da Augost ee magaalada Garoowe.
Munaasabadda oo ka dhacday hoolka xafladaha iyo shirarka Jaamacadda PSU Garowe ayaa waxaa soo buux dhaafiyay dadwayne farabadan iyo masuuliyiin dhinacyo kala duwan matalaysay oo ay kamid ahaayeen Wasiirka waxbarashada Puntland, Wasiirka Cadaalada, Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Duqa magaalada Garowe, mulkiilaha Warbaahinta SBC Siyaasi Cali Cabdi Awaare madaxda Shirkadda Golis iyo Salaam Bank iyo marti sharaf kale.
Aadan Shiekh Doon Cali oo kamid ah guddiga sare ee shirkadda Golis oo ka hadlay munaasbadda ayaa uga mahadceliyay dadwaynaha reer Garoowe inay sanadka marti galiyeen gunaanadka Barnaamijka Kediska Ramadaan, si gaar ahna ugu hambalyeeyay xaafadda 1da Augost Garowe ee noqotay horyaalka sanadka,
Aadan Shiekh Doon ayaa xusay in sanado badan ay soo waday shirkaddu barnaamijkan ay uga gol’lahayd in bulshada lagu jiheeyo dhinaca wanaagga islamarkaana lagu kobciyo garaadka dhalinta soo koraysa.
Dhinaca kale shirkaddaha Golis iyo Salaam Bank ayaa madasha kusoo bandhigtay bakhtiyaanasiib ay hadiyado qaali ah kula wadaagayeen dadwaynihii kasoo qayb galay munaasbadda. waxana dadka qaar ay ku guulaysteen moobeelo casri ah iyo iyo dhar noocyo kala duwan leh.
Ugu dambayn waxaa abaalmarinadii ay mutaysteen la gudoonsiiyay labada xaafadood ee kala galay kaalmaha 1aad iyo 2aad iyo sidoo kale xaafadihii ku kala guulaystay kaalmaha 3aad iyo anshaxa.
Mulkiilaha warbaahinta SBC siyaasi Cali Cabdi Awaare ayaa dhankiisa ku amaanay shirkadda Golis mudadii 12ka sano ahayd ee ay la waday warbaahinta SBC barnaamijka kediska Ramadaan.
Waxaa soo xiray xafladda Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Puntland Abshir Yuusuf Awciise isagoo uga mahadceliyay shirkadda Golis iyo Salaam Bank sida wanaagsan ee ay uga qayb qaateen barnaamijka Kediska Ramadaan oo uu ku tilmaamay mid muhiimad balaaran xambaarsan islamarkaana ay dhalintu kaga mashquuleen waxyaabihii kale ee waqti dhumiska ahaa isagoo ugu dambayna ugu hambalyeeyay dadaalka ay sameeyeen xaafadaha dagmada Garoowe oo soo gaaray wareeggii kama dambaysta.